१७ मिनेटमा दिइन् एकैपटक ११ बच्चालाई जन्म | News Polar
१७ मिनेटमा दिइन् एकैपटक ११ बच्चालाई जन्म
न्यूजपोलार फाल्गुन ०९, २०७७, आइतबार
सबै बच्चा स्वस्थ र फुर्तीला
एजेन्सी । मारिया हर्नान्डेज नामक महिलाले १७ मिनेटमा ११ बच्चालाई जन्म दिएकी छन् । इन्डियानामा एक ४२ वर्षकी महिलाले एकैपटक ११ बच्चाहरुलाई जन्म दिएकी हुन् । ति सबै बच्चा सुरक्षित र तन्दुरुस्त छन् ।
अहिले सम्म तपाईले एक महिलाले जुम्ल्याहा वा तिम्ल्याहा सम्म बच्चा जन्माएको त सुन्नु भएको छ होला तर एकैसाथ उनले ११ बच्चालाई एकैपटक जन्म दिएकी छिन् जुन धेरै नै अचम्मको छ । साँच्चै नै यो कुरा सुनेर सबै मान्छे अचम्ममा पर्छन् र धेरैले यस्तो पनि हुन्छ र भनेर प्रश्न पनि गर्न सक्छन् ।
यो डेलिभरीको केस हेरेपछि अस्पतालको सबै डाक्टर अचम्ममा परेका छन् । मारिया हर्नान्डेजको डेलिभरिको लागि धेरै दुखाई भएपछि मात्रै अस्पतालमा भर्ना गरिएको थियो । मारियाको परिवारले यसलाई एक चमत्कार मानेका छन् र सबै बच्चा स्वस्थ भएको कुरालाई लिएर धेरै नै खुशी छन् ।
मारियाका पतिले यसलाई एक चमत्कार मानेका छन् र अहिले धेरै मानिसहरु उनलाई बधाई दिन थालेका छन् र उनले पनि शुभेच्छुकलाई आभार प्रकट गरेका छन् । यस्तै धेरै मानिसहरु यस घटनालाई चमत्कार मानेका छन् ।
# ११ बच्चालाई एकैपटक जन्म # चमत्कार # जुम्ल्याहा # मारिया हर्नान्डेज # जनसङ्ख्या # अस्पताल भर्ना
प्रकाशित : फाल्गुन ०९, २०७७, १४:१४:२८
एक भेडाको शरीरबाट ३५ केजी उन निक्लिएपछि
विश्वमै दुर्लभ मानिएको ‘ब्ल्याक प्यान्थर’ नेपालमा !
धन प्राप्तिका लागि यसरी गर्नुहोस् आरती !
यी हुन् प्रेमी-प्रेमीकाले एक-अर्कालाई कहिल्यै भन्न नहुने ४ कुराहरू